Umndeni we-Aron "Val" sekukade udumile ngokusetshenziswa kobuchwepheshe obuphambili kanye nentuthuko ehlukile ngempela. Thatha okungenani umshini omusha, kodwa usuvele uthola udumo "I-Whirlwind" - isibhamu esingenakuqhathaniswa nesicindezelayo, esinesikhathi sokuthandana nama-spetsnaz. Umlingani wakhe u-AS "Val", ohlanganyela ezinkampanini eziningi zempi, waba udumo ngisho nangaphandle kweRussia, wayedlula kalula ama-analogues amaningi. Inkampani efanelekayo yena no "Vintorez" - isibhamu, ukuhlanganisa izinzuzo ze-sniper nokushaya.
I-Echo yeMpi Yomshoshaphansi phakathi kwamazwe neNyunyana yenza uzizwele ngisho nasesikhathini sethu. "Vintorez" I-WBU yasungulwa ngaphansi komyalelo okhethekile kahulumeni ngawo-1970. Ukuhlolwa ngokuphumelelayo kwafaka isandla ekwamukelweni kwayo. Emuva kuma-80, kwawela ezandleni zama-KGB, ama-scouts namanye amabutho akhethekile eMnyango Wezangaphakathi. "Vintorez" i-VSS ivunyelwe ukushaya amathekithi cishe ngokuthula. Futhi konke ngenxa yesakhiwo esiyingqayizivele se-silencer. Futhi ngosizo lwayo kwakungenzeka ukubhubhisa hhayi kuphela amandla okuphikisana nesitha, kodwa futhi nezimoto zayo ezingekho izikhali.
Ukusetshenziswa kwesibhamu esisha kwaphumelela kangangokuthi umthuthukisi we-isibhamu TsNIITOCHMASH waqala ukwakha umshini oqondiswa ngokucacile esisekelweni sakhe. Le nqubo ayidluliselanga kuphela ukuhlonishwa kanye nezindiza zokuhlaselwa komhlaba, kodwa ngisho nasezinhlanhleni. "I-Vintorez" i-BCC ne-AS "Val" yenzelwe i-cartridge efanayo, isakhiwo sayo sifana kakhulu, izingxenye eziningi zingashintshana. Akumangalisi ukuthi cishe zonke izindlela zalo zokulwa lezi zinhlobo ezimbili zezikhali zihamba ngehlombe.
Idivayisi nezici zayo
Ukuklama kwesibhamu kuyinto elula. Umshini wokumangalisa uqukethe umculi wezingoma kanye nokuseshwa okubili. Omunye wabo unesibopho somlilo othomathikhi, owesibili ngomlilo owodwa. Isimiso sokuzenzekelayo sinezindlela eziningi ezifana nalokho esetshenziselwa isibhamu se-Kalashnikov. Isibhamu BCC "Vintorez" sinezingxenye ezilandelayo esakhiweni:
Iqembu lamadivayisi okubuka;
Uhlaka lwe-slide nge-piston;
Ukumangaza, ukubuya nokuqala izindlela;
Ngaphezu kwalokhu okungenhla, kukhona isitolo esivamile, esenzelwe ukuzungeza okungu-10.
I-Automation isebenza ngokuyisimiso sokukhishwa kwamagesi e-powder ngokusebenzisa umzila wesigodi ukuya egumbini legesi. Isiteshi ngokwayo sivaliwe ngokushintshanisa i-shutter. I-piston yegesi ineqembu eliqinile nesakhiwo sesango. Emgodleni walo kuyinto entwasahlobo yokubuya. Umlindi wekhalenda ungakwesokudla, ngaphandle komsebenzi oqondile, futhi uvikela ibhokisi ekuthunjeni uthuli nobumbe. Amamodi omlilo ashintshwe ngendlela ekhona ku-guard trigger: isikhundla sayo esinqunyiwe sivumela ukuba umlilo ungashadile, isikhundla sokuqhuma kwesibunxele.
Ukubheka amadivaysi okudubula kubhekwe embonini ye-silencer nokubona kwangaphambili. I-front of the trunk enezinsika eziyisithupha zemigodla ihlanganiswe ngokuphelele ngumsizi. Kungenxa yalezi zimbobo ukuthi kwakhiwa ama-powder gases. Ngemva kokudlula kubo, bawela emshinini we-muffler, futhi lapho bahlakazeka ngokulandelana emifuleni ephakathi, beshiya amakamelo okukhulisa.
Isibhamu singahlonywa nge-optics PSO-1, NSPU-3, ne-collimator.
Isibhamu se-Sniper BCC "Vintorez" sinezinzuzo ezimbili ezingenakuphikwa ukuthi zihlukanise phakathi kwabalingani bayo. Okokuqala, lokhu kuyithuba lokudubula cishe ngokungenangqondo.
Lesi sici sihambisana nesici sesakhiwo nobukhulu obukhulu. I-optics evamile, isithuli kanye nesikhombisi kukhona izingxenye ezikhishwayo, ukudiliza okuyinto, kulula ukufihla isibhamu esikhwameni semidlalo esincane .
Njengabo bonke abameleli bomndeni "VAL", "Vintorez" inxusa ama-cartridges we-caliber 9x39 - SP-5 ne-SP-6. Lezi zinhlamvu ezinamandla zingabhubhisa ngisho nezikhali ezilula zemishini yempi.
Kuyaphawuleka ukuthi bane-ballistics ehlukile, badinga ukudubula izikhali ngokwehlukana ngayinye yazo. Ochwepheshe abaphakamisi ukusebenzisa ama-cartridges e-SP-6 ngaphandle kwesidingo esikhethekile, njengoba bephuthuma ukugqoka kwezikhali, ngenxa yengqalasizinda eqinisekisiwe yensimbi.
Amandla we-Lethal nokubukwa kwebanga
I-Patron SP-5 ingakwazi ukudiliza izinsimbi ezimbili-millimeter bese ishaya izinhloso eziphilayo ngemuva kwayo. I-SP-6 igqamisa lesi sakhi nge-20%. Ngesikhathi eside sokudubula okuhlosiwe, lezi zikhali azikwazi ukuziqhayisa, futhi lokhu akuyona into ecacile. Noma kunjalo, "i-Vintorez" iyisipiliyoni sonke, esifaneleka kuqala kunazo zonke izikhukhula. Ngakho-ke, ukuze ungene ekhanda lesitha, kufanele ufike kuye okungenani ngamamitha angu-200. Emzimbeni womzimba ongayithola kusuka kabili ibanga. Ukufakwa kwamadivaysi okubona okungeziwe kulungiselelwe ububanzi obuningi besigamu sekhilomitha.
Naphezu kwezinzuzo eziningana, akudingekile ukuba ucabange ukuthi "iVintorez" i-VSS idlula zonke izilinganiso. Izikhali zenzelwe ngokuyinhloko ukwenza ukuhlaselwa, ukulwa nobuphekula, ukuhlonishwa nokuhlukunyezwa. Lesi sikhali siyindawo ekahle lapho u-fighter engakwazi ukuvula indawo yakhe, kodwa kungenzeka ukuba asondele eduze komgomo. Mhlawumbe, kwezinye izimo kunengqondo ukusebenzisa iSVD endala, noma ngabe inkulu, kodwa ibamba umgomo ekude cishe amakhilomitha. Ngaphezu kwalokho, "iVintorez" ayiklanyelwe izimpi zesikhathi eside. Kodwa lapho, lapho udinga ukubonakala ungaqapheleki khona, ngokushesha futhi ngokuthula ufeze umsebenzi, bese uvele uvele nje ubalekele - isibhamu esisodwa esibalulekile BCC "Vintorez." Intengo yesibhamu sokulwa isincane kakhulu, okwenza kube lula, uma kunesidingo, ukufaka izingalo ezikhethekile eziphathelene nengalo.
"Vintorez" ngokuphila okunokuthula
Ukuthanda izingalo ngokuvamile kuvame ukuhlangenwe nakho kwezempi kanye nezinhlangano zomthetho. Ibuye ibangele abagibeli abanokuthula. Ngakho-ke, ikakhulukazi ngale njongo, izilinganiso ezingezona zokulwa zeWintoret WSS zakhiwe. I-Strikeball, i-laser tag, i-paintball - ezemidlalo, lapho ungathola khona inguqulo yomphakathi yalesi sifuba. Yiqiniso, ukuklanywa kwezikhali kushintshwe kakhulu, kodwa ifomu lifana nendawo yokuqala ngangokunokwenzeka. Igcinwe futhi ifomu elikhethekile lesitokisi, nesithuli, nomzimba womzimba. U-Strikbolny VSS "uVintorez" esitolo esikhethekile angathengwa ngama-dollar ayi-500 kuya ku-600, kuye ngokucushwa.
Ukubamba iqhaza ezimpini nasezingxabaneni ezihlomile
Ngokokuqala ngqa, lo mqhudelwano "uVintorez" ubonakele ngesikhathi somkhankaso we-First Chechen. Wabe esehlomile ngamabutho akhethekile ebutho laseRussia. Wabamba iqhaza e-Chechen yesibili. Kuyaziwa ukuthi kwakunjalo ngenkathi i-sniper yaseRussia yedwa isichitha sonke isitha sokuhlukumeza isitha esivela kulesi sigameko "Vintorez", ngisho nangaphambi kokuba izimbangi zikwazi ukubona ukuthi ziphi uhlangothi abadubulayo.
Ngenkathi ingxabano yaseGeorgia-Ossetian, uVintorez wayehlomile ngezandla zombili.
Lesi sigameko sagxila ekusebenziseni kwamaphekula okwakudume kakhulu eBeslan. Ngokuhlaziywa okulandelwayo kwamafilimu aqoshwe izintatheli, kwafunyanwa ukuthi okungenani umuntu oyedwa wabulala uVintorez.
Njengamanje, lesi sibhamu asikona kuphela kumasosha aseRussia kanye neziphathimandla zomthetho. Kuthunyelwa ngaphandle nangaphandle. Kuyaphawuleka ukuthi isithakazelo hhayi kuphela eLatin America, e-Afrika, eMpumalanga Ephakathi nesikhala seSoviet, kodwa nase-United States.
Ingabe ikusasa elihle lephrojekthi "Vintorez"?
Kunzima ukuqagela ukuthi kwenzekani lesi sigameko. Kuze kube manje, awunalo i-analogue ehloniphekile ekilasini lakhe, kodwa akudingekile ukukhuluma ngokukhiqizwa kwayo okukhulu, okungenani okungenzeka kube nokuncintisana neSVD evelele. Okokuqala, lokhu kungenxa yokusetshenziswa kwezikhali ezingavamile ezingabonakali nge-ballistics ekhethekile.
Kodwa kunoma yikuphi, into eyodwa icacile - ngokukwenziwa komsebenzi obelwe, "Vintorez" i-VSS ikwazi "ukuhle kakhulu". Futhi labo abaye babhekana empini ngokubambisana bathi lesi sikhali "ukufa okungenangqondo kweRussia."
Hamba IZH-60 RSD: imininingwane kanye nezithombe
MSE unqulo wesi arab - Ukuvikelwa compact onokwethenjelwa kukhompyutha yakho
Windows Boot Manager: Kuyini lokhu? imiqondo Basic, amaphutha nezindlela ukuwalungisa